आइपिओ पश्चात सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको प्रगति : नाफा ११०% वृद्धि हुँदा अधिकांश सूचकमा चमक ! - Arthasansar
आइपिओ पश्चात सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको प्रगति : नाफा ११०% वृद्धि हुँदा अधिकांश सूचकमा चमक !
विहीबार, ०४ मंसिर २०७७, १२ : ५८ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौँ - सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन पश्चात राम्रै प्रगति गरेकाे देखिन्छ । कम्पनीले आज चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार नाफासँगै कम्पनीकाे अधिकांश सूचकमा चमक देखिएकाे छ ।
उक्त विवरण अनुसार कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा एक कराेड ५६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएकाे छ । उक्त नाफा रकम गत आर्थिक वर्षकाे यसै अवधिकाे तुलनामा १०९.९९ प्रतिशतले धेरै हाे । गत वर्षको यही अवधीमा कम्पनीले ७४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेकाे थियाे ।
यसैगरी, पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आम्दानी गरेकाे छ । उक्त रकम गत आर्थिक वर्षकाे तुलनामा १३ लाख ९ हजार रुपैयाँले धेरै हाे । गत वर्षकाे यही अवधीमा कम्पनीले ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेकाे थियाे ।
त्यस्तै, कम्पनीकाे चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ, जगेडा कोषमा ५ करोड ६४ लाख र बीमा कोषमा ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ । कम्पनीकाे प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ९५ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ ११८ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ ।
कम्पनीले प्रकाशन गरेकाे वित्तीय विवरण यस प्रकारकाे छ :